राजनीति Archives - Page 122 of 152 - Dna Nepal
समानुपातिकतर्फ एमाले र कांग्रेसबीचको मतान्तर ५२ हजार मात्र १ पुष २०७४, शनिबार ०५:४५
काठमाडौँ, पुस १ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निवाचन प्रणालीतर्फको पछिल्लो मतगणनामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको ५२ हजार मतको मात्र अन्तर देखिएको छ । नेकपा एमालेले ५२ हजार मत अन्तरले नेकपा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ..
ओली र प्रचण्ड को प्रधानमन्त्री ? (नेताका आ–आफ्नै अभिब्यक्ति) २८ मंसिर २०७४, बिहीबार ०८:०७
काठमाण्डौं, मंसिर २८ । नेकपा एमालेका नेता तथ पूर्व उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले अबको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएको बताएका छन् । वाम गठबन्धन निर्माण गरेर यो अवस्थामा ल्याउने मुख्य व्यक्ति नै केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष..
सांसदको टिकट पाउनु भएन ? के चिन्ता, मन्त्री बन्न तयार हुनुस्
काठमाडौं, मंसिर २८ । नयाँ सरकारमा सांसद नभएको ब्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने भएका छन् । निर्वाचनमा भाग नलिएका वा गैर राजनीतिक ब्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिे मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ..
समानुपातिकमा एमालेले २५ लाख कटायो, कुन दलको कति ?
काठमाडौं, मंसिर २८ । मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हालसम्मको मतगणनामा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ । एमालेले नेपाली काँग्रेस भन्दा ८५ हजार मत बढी पाएको छ । हालसम्म कुन दलले कति मत पाए ?..
नेतृत्वको कमजोरीले काँग्रेस हार्यो–प्रकाशमान सिंह २७ मंसिर २०७४, बुधबार १६:३५
काठमाण्डौं, मंसिर २७ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताले दलको इतिहास, कार्य सम्पादन, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि हेरेर मलाई जिताए भन्ने लागेको छ। यसअघि दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट मैले नै अवसर पाएको थिएँ । अहिलेको..
चितवनको समानुपातिकमा काँग्रेस अगाडि
भरतपुर, मंसिर २७ । प्रत्यक्षमा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र बाम गठबन्धनले जितेके चितवनमा समानुपातिकमा भने नेपाली कांग्रेस अगाडि देखिएको छ। प्रारम्भिक मत गणना अनुसार नेपाली कांग्रेस ८ हजार ३५, नेकपा एमाले ७ हजार ३ सय ९८ र नेकपा माओवादी ४ हजार ३ सय ४७..
बिजय गच्छदार पाँच सय मतले अगाडि
पोखरा, मंसिर २७ । प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये जितको छिनोफानो हुन बाँकी एकमात्र क्षेत्र सुनसरीको क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारले पछिल्लो समयमा अग्रता लिन थालेका छन् । ताजा अवस्थामा गच्छदारले नेकपा..
प्रदीपको क्षेत्रमा फेरी चुनाव गर्न काँग्रेसको माग २६ मंसिर २०७४, मंगलवार १७:२४
काठमाण्डौं, मंसिर २६ । नेपाली कांग्रेसले तनहूँ क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा ‘क’ पुनः मतदान गर्न माग गरेको छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल वामपन्थी उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग ५ मत पराजित भएका थिए । नेपाली..